Chelmo - သာမှပေါင်းတဲ့သူတွေ အကြောင်း
သာမှပေါင်းတဲ့သူတွေကတော့ အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုလူတွေကို ကြည့်ပြီး မုန်းနေတဲ့သူတွေရှိသလို၊ မသိသလိုသာ နေလိုက်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
သူတို့ကြောင့် စိတ်မညစ်ရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာကို သိရအောင် ထူးခြားချက်လေးတွေကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
၀၁. ချီးကျုးဂုဏ်ပြုရတာ အခြားသူများထက် တမူထူးခြားတတ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ ချဉ်းကပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသောသူကို မြှောက်ပြော၊ ပင့်ပြောရတာ အလွန်ပင်တော်ပါတယ်။ ဒီလူဘယ်လိုပြောလိုက်ရင် ပျော်သွားမလဲ၊ ဆိုတာကို သေသေချာချာ လေ့လာထားသလို၊ ပြောဆိုရာတွင်လည်း ပြုံးရွှင်နေပြီး သွားတွေကဖြီးနေတာတာပါပဲ။ သူတို့ဟာ စကားပြောဆို အလွန်ကောင်းပြီး ဘာပြီးရင် ဘာပြောရမလဲဆိုတာကို ခေါင်းထဲမှာ စဉ်းစားထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပြောခံရသောသူကတော့ စိတ်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်နေမှာ အမှန်ပါ။
၀၂. ပုံမှန်အားဖြင့် သွက်သွက်လက်လက် ဆက်ဆံတတ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ လိုအပ်သောသူအပေါ်မှာ လိုက်လိုက်ရောရော ဆက်ဆံတတ်ပြီး အမြဲတမ်း သွားတွေက ဖြီးနေတတ်ပါတယ်။
၀၃. မျက်စိရှေ့နဲ့နောက်ကွယ်မှာ ခြားနားချက်တွေ ရှိပါတယ်။
သူတို့ဟာ ချဉ်းကပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသောသူအပေါ်မှာ သူတို့အလိုလိုက်ရောပြီး ပေါင်းတတ်ပြီး အရှေ့မှာ တစ်မျိုး နောက်ကွယ်မှာ တမျိုးလုပ်တတ်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်ရဲ့အကြောင်းမှာ ထောက်လို့ရရန်အကွက်ကောင်းများရှိနေရင်တော့ သူတို့အတွက် အခွင့်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
၀၄. သြဇာရှိသူကို ချဉ်းကပ်ရန် ဝန်မလေးပါ။
သူ့အတွက် အကျိုးရှိသူကိုတွေ့ရင် အမိအရလိုက်သာဖမ်းတော့မှာ အမှန်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့ရန်သာ အဓိကပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘာတွေကို နှိမ်ပြော၊ ကဲ့ရဲ့လျှင်လည်း မသိသလိုနေတတ်သူပါ။
၀၅. ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေဘာတွေက နောက်ထားလိုက်ပါ။
ပစ်မှတ်က ဘဘောကျဖို့ရန်သာ ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေ၊ ခံယူချက်တွေကို မေ့ထားတတ်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်က ပြောသမျှ အားလုံး ဟုတ်ကဲ့ချည်း၊ ပြောနေတော့မှာပါ။
၀၆. တတ်နိုင်သလောက် ပြုံးပြုံးလေးနေတတ်ပါတယ်။
သူတို့အတွက် နစ်နာမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင် မသိသလို ပြုံးပြုံးကြီးနေတတ်ပါတယ်။ ရန်ဖြစ်ရမှာထက် အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို နားလည်ပါတယ်။
၀၇. လက်ဆောင်တွေကိုလည်း မမေ့ပါ။
ပစ်မှတ်က ဘယ်လိုအသုံးအဆောင်တွေကို နှစ်သက်သလိုဆိုတာကို အမြဲတမ်း လေ့လာထားပြီး အချိန်အခါအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး လက်ဆောင်လေးတွေကိုလည်း ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
၀၈. မမေ့သွားအောင် ခဏခဏဆက်သွယ်လေ့ရှိတယ်။
ပစ်မှတ်က မေ့မသွားအောင် ဖုန်းဆက်သလို၊ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ချဉ်းကပ်ပြီး သူ့ကို သတိရနေအောင် ဆွဲဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အတွက် အကျိုးရှိမယ့်သူအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဆက်ဆံရေးက ပြောင်းလဲသွားနိုင်တာကြောင့် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတမျိုးဆိုလည်း မမှားပါ။